Kufunga nezve Kuvaka Vs Kutenga MarTech | Martech Zone
Mubvunzo wekuti kuvaka kana kutenga software ndeyekuenderera mberi kuitirana nharo pakati pevanyanzvi vane akasiyana maonero pa internet. Sarudzo yekuvaka yako yemukati meimba software kana kutenga musika yakagadzirira mhinduro mhinduro inoramba ichichengeta vazhinji vevanosarudza vachivhiringidzika. Nayo SaaS musika iri kusimukira kune kubwinya kwayo kuzere uko saizi yemusika inofungidzirwa kuti isvike USD 307.3 bhiriyoni na2026, zviri kuita kuti zvive nyore kuti mabhenji anyore kumasevhisi pasina chikonzero chekuchengetedza Hardware kana zvimwe zviwanikwa.
Tisati tanyura takananga mukukakavadzana kwekuvaka nekutenga, ngationgororei maitiro evatengi uye nzira dzekutenga dzakapfuura nemushanduko zvakare.
Shanduko yedhijitari ine vatengi vane zvombo zvine mafoni, mapiritsi uye vashandisi nhasi vari kuda uye kutarisira sevhisi, nokudaro vachiumba izvo zvigadzirwa zvavanopa. Hakuzove mazuva emhando ekuraira uye kufurira zvinotarisirwa nevatengi. Nepo sarudzo-kuneta uye hudzvanyiriri hwesarudzo hwakanganisa danho rekutora sarudzo, injini dzekuenzanisa mutengo, pamwe chete nemanzwi eVakuru Maonero Vatungamiriri (KOLs) nevanokurudzira, vari kubatsira vashandisi kutenga zvine ruzivo.
Iyo Yemazuva Ekutenga Nzira
Iko kuchinja kwesimba remagetsi pakati pevatengi nemabhureki kwagadzirisa nzira yechinyakare yekutenga. Iyo yazvino nzira yekutenga, inotungamirwa nekufambira mberi kwetekinoroji uye akawanda masosi enhau, yabvisa zvigadzirwa mumashefu ezvitoro ndokuzviisa mukati meiyo dhijitari ecosystem, ichipfuura nzvimbo dzenzvimbo kuti zviitwe zvisina musono uye zvine hungwaru.
Source: MoEngage Mutengi Wenongedzo kune Mutengi Engagement
Mufananidzo uri pamusoro uyu unoratidza mafambiro evatengi mafambiro ekuchinja kweparadigm, iyo yakachinja hukama hwevatengi-brand kubva mukutengesa kunotungamirwa kudhiraivho.
Tichifunga nezve mapoinzi ari pamusoro apa maratidziro arikuita kuti vawedzere vatengi macultric mukuita kwavo, zviri kuwedzera kukosha kugadzirisa iyo kuvaka vs kutenga dambudziko. Asi hazvisi izvo zvakananga. Usati wafunga kuti zvirinani kuvaka chikuva kubva pakutanga kana kuwana tekinoroji iripo, hezvino zvinhu zvishoma zvaunofanira kufunga nezvazvo:
Mutengo unobatanidzwa mukuvaka kana kutenga: Kuvaka chimwe chinhu kubva pakutanga kuchave kwakakura zvichienderana nehukuru hwechikwata / kambani uye iwe uchafanirwa kuverengerana yemurume-maawa, zvivakwa, uye mutengo wekugadzirisa, zvese izvi zvakaoma kufungidzira nenzira kwayo. Zvichakadaro tichitenga mhinduro yekuwana zvidikanwi zvakasiyana mukati mechikwata, mumwe angangoda kufunga nezve marezinesi emari anosiyana zvichienderana nekushanda kwevashandisi kuverenga uye masevhisi anoshandiswa.
Inoperekedza njodzi pakutenga kana kuvaka: Njodzi huru dzinosanganisirwa nekutenga ishoma kudzora uye kuwana pamusoro peiyo software, sosi kodhi, uye bug, panguva iyi nekuvaka mhinduro, njodzi huru iri pakukwanisa kuendesa nechikwata chebudiriro icho chinogona kukonzera kuwedzera mari.
Dambudziko rakagadziriswa kuburikidza nemhinduro: Hazvina kuchenjera kuenda kuburikidza nedambudziko rekuvaka chimwe chinhu chakasarudzika kubva pakutanga kana chisinganyatso kuwedzera kune yako yepazasi mutsara. Inowanzo kurairwa kuti utenge zvinhu kambani imwe neimwe inoda uye nekuvaka zvinokusiyanisa iwe.
Teedzera rekodhi reboka rekuvandudza: Pima hunyanzvi hwechikwata chako chekuvandudza uye kukura maererano nehunyanzvi, kugona, uye kugona kununura. Kana ivo vakayera kusvika padanho rakanaka, saka kuvaka software mukati-imba kunonzwisisika kana uchienzaniswa nekutenga mhinduro-yakagadzirira musika.
Zviwanikwa zviripo zvaunogona: Bajeti chinhu chikuru chekusarudza kana zvasvika pakutenga vs kuvaka gakava. Yakakwirira iyo muganho wekushandisa unoshandiswa nema brand, zvinopa kuvaka software zvakanyanya kufarira. Kune makambani ane bhajeti shoma, kutenga mhinduro inzira iri nyore yekugadzirisa izvi.
Nguva-kumusika zvinodiwa: Chimwe chezvinhu zvakakosha kutarisisa kutenga mhinduro inzira inokurumidza kuenda-kumusika sezvo ichigona kuendeswa mukati memavhiki masere kusvika gumi nematanhatu (zvinoenderana nekuoma kwematambudziko ekushandisa) zvichienzaniswa nemwedzi kana makore aanogona. tora kuvaka chikuva-mumba.
Izvo zvakakosha zvebhizinesi rako: Kana iwe ukavaka yako wega mhinduro mukati, ichave iri yekutanga nebhizinesi rako? Pamwe kwete, izvo zvinogona kuendesa kuve inhibitor kufambira mberi kana kambani yako isingakwanise kuenderera nekudyara mairi. Tekinoroji iri mukutenderera kwese kweshanduko, haisiyo-uye-yakaitwa chirongwa. Kambani inogadzira mhinduro iwe yaunogona kutenga inoenderana nemhinduro iyoyo ichichinja uye ichiramba ichipa kukosha kune vatengi vayo.
Mumwe anofanirwa kudzivirira kutambisa nguva mukuvaka nekugadzira chimwe chinhu chakatovakwa musika. Iyo yekupedzisira chinangwa chemakemikari ndeyekupa mutengi neakanakisa-mu-kirasi ruzivo uye kana izvo zviri kutemerwa netekinoroji yatovepo, munhu anofanirwa kunge ari kunyatsoshandisa yakawanda nguva uye simba kuvaka mhinduro?
Chinonyanya kukosha kumakambani kungave kushungurudza ruzivo rwevanhu rwavanopa pane yega yekubata kune vashandisi uye nekuvandudza kwavo kutsigirwa kwevatengi nemasevhisi. Iyo inogara ichikura musiyano uripo pakati pevatengi zvinotarisirwa uye kugona kwechiratidzo kuzvizadzisa ndeimwe yematambudziko makuru ayo mamaneja epanguva ino arikuda kugadzirisa. Kuti unzwisise kuti tarisiro yevatengi yashanduka sei, zvakakosha kuti utarise shanduko mune zviitiko zvevashandisi nemaitiro pamwe nemabatiro avanoita sarudzo dzekutenga.
Tags: brand brandkuvaka maringe nekutengakuvaka vs kutengarwendo rwevatengivatengi lifecyclebudirirotekinoroji iri kubudaIn-housekushambadzira tekinorojimartechtekinoroji yekareyechinyakare tekinorojinzira yekutengaTechnology